Nhicha ime ụlọ, Ọrụ nhicha, Ngwa nhicha- Airwoods
Ikuku Ijikwa Air
Okpomọkụ mgbapụta Okpomọkụ Recovery Ventilator
Anyị na-elekwasị anya na HVAC Innovative & Solroom Solutions
AIRWOODS bụ onye na - eweta ụzọ zuru ụwa ọnụ na - eweta ike kpo oku ọfụma, ikuku na ikuku ikuku (HVAC) yana mezue HVAC maka ahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Nkwenye anyị bụ inye ndị ahịa anyị ọrụ na ngwaahịa kachasị mma na ọnụego ọnụ.
Ndị ọkachamara nwere aka ọrụ
Mba ndị jere ozi
Kwa Afọ Complete Project
Sistemụ Nlekọta na Mmejuputa
Nye ọrụ na ntụnye ndụmọdụ, nhọrọ ngwaahịa na eserese imewe dịka ọrụ ndị ahụ.
Oversea nwụnye & nyere ọrụ
Ndị otu nrụnye Airwoods nwere nrụpụta dị ukwuu na saịtị, nrụnye na ọrụ inye ọrụ.
Ngwọta Sistem & Ngwá Ọrụ
Nye ihe ngwọta kachasị na imewe, ị nweta, njem, ntinye, ọzụzụ na ọrụ ọrụ.
Ọrụ Training & Mgbe Ahịa Ọrụ
Inye ọzụzụ ndị ọkachamara iji nyere ndị ahịa aka ijikwa sistemụ ha nke ọma, belata mmejọ ma gbatị oge ọrụ igwe.
Ngwọta Site Nrụpụta
Nkwenye anyị bụ inye ndị ahịa anyị ọrụ na ngwaahịa kachasị mma na ọnụego ọnụ.
Site na njikwa nnweta na mgbochi intruder, site na onyunyo vidiyo na cybersecurity.
Ugbo Ugbo Ugbo Ugbo Ugbo Ugbo
Site na teknụzụ igwe ikuku ikuku, arụmọrụ dị elu nke ime ụlọ ugbu a na-ewu ewu n'ihi nrụpụta ya dị elu ma kwụsie ike n'afọ niile, yana uru akụ na ụba bara uru.
Ime ụlọ ọcha
Cleanlọ nhicha ma ọ bụ ime ụlọ dị ọcha bụ ebe a na-ejikarị arụ ọrụ dị ka akụkụ nke mmepụta ụlọ ọrụ pụrụ iche ma ọ bụ nyocha sayensị, gụnyere imepụta ọgwụ ọgwụ na microprocessors.
N'ihi na-ebi akwụkwọ mmepụta usoro voltatile organic ogige (VOCs) na-abịa site ink ...
Lọ oriri na ọurantụ .ụ
HVAC sistemụ bụ otu ihe nrụnye kachasị mkpa na ụlọ oriri na ọ /ụ /ụ / ụlọ nkwari akụ ahụ ...
Ogige ndị na-agbanwe agbanwe
Airwoods VOC ọgwụgwọ, njikwa na mgbake ngwọta, obere ihe egwu ikuku ikuku ...
A bịa n’agụmakwụkwọ, ọtụtụ oge anyị na-ezo aka n’ụlọ akwụkwọ ebe ụmụ akwụkwọ abụọ ...
Nyochaa ebe vidiyo maka ngosipụta oru ngo na akụrụngwa agụmakwụkwọ.
Jikọtara Air Ijikwa Units
Ndị na-ehichapụ ikuku na ọrụ Disinfection
Modular Air-mma Pịgharịa Chiller
CVE Series adịgide Igwe Ọdụdọ Synchronous Inverte ...
Mpempe Sandwich ajị anụ ajị anụ ọnụ
Akwụsịrị DX Air Ijikwa Unit
Vetikal Type Okpomọkụ mgbapụta Energy Okpomọkụ Recovery Ve ...
Mmiri Na-ejikwa Ikuku Ijikwa Mmiri
CLỌ ỌRMENT VOCs
Ọnwa iri 22, 2020
Ọdịiche Dị n'Etiti Pụrụ Iche & Nrụgide Nsogbu Cleanroom
Kemgbe afọ 2007 ， Airwoods raara onwe ya nye iji nye hvac ihe ngwọta maka ọrụ dị iche iche. Anyị na-enyekwa ọkachamara ngwọta ụlọ dị ọcha. Na ndị na-emepụta ụlọ, ndị injinia oge niile na ndị ọrụ njikwa ọrụ, nyocha anyị ...
Ọnwa iri 17, 2020
Isi nke FFU na Nhazi System
Gịnị bụ Fan Myọcha Unit? Ngwunye ihe ntanetị ma ọ bụ FFU dị mkpa ihe ntanetị na-agbapụta laminar yana igwe ọkụ na moto. Onye ofufe na moto dị n’ebe ahụ iji merie nrụgide static nke ntụgharị HEPA ma ọ bụ ULPA. Nke a bụ benefi ...
Iri na Otu 15, 2020
Kedu otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri si erite uru site na ụlọ mposi dị ọcha?
Ahụike na ahụike nke ọtụtụ nde na-adabere na ndị nrụpụta 'na ndị ngwugwu nwere ike ijigide gburugburu ebe nchekwa na ọnọdụ na-adịghị ize ndụ n'oge nrụpụta. Nke a kpatara na ndị ọkachamara na mpaghara a na-agbaso ụkpụrụ siri ike karịa ...
Ọnwa Iri 28, 2020
Airwoods HVAC: Mongolia Projects Ngosi
Airwoods arụzuola ihe karịrị ọrụ 30 na Mongolia nke ọma. Gụnyere Nomin State Department, Tuguldur Shopping Center, Hobby International School, Sky Garden Obibi na ndị ọzọ. Anyị raara onwe anyị nye nyocha na teknụzụ na-emepe emepe ...
Ọnwa Iri 26, 2020
Na-adọnye akpa maka Bangladesh PCR Project
Mbukota na ịkwanye akpa ahụ nke ọma bụ isi ihe na-eme ka mbuga ahụ nwee ọdịdị dị mma mgbe ndị ahịa anyị natara na njedebe nke ọzọ. Maka oru nhicha a nke Bangladesh, onye njikwa ọrụ anyị Jonny Shi nọrọ na saịtị iji lekọta ma nyere aka rụọ ọrụ niile. Ọ ...
Kemgbe afọ 2007, Airwoods raara onwe ya nye iji nye hvac zuru oke, ime ụlọ dị ọcha yana ọgwụgwọ VOC maka ụlọ ọrụ dị iche iche. Ebumnuche anyị iji wepụta ngwaahịa ikuku dị mma na ụwa na ngwaahịa ndị na-arụ ọrụ ike, ihe ngwọta kachasị mma, ọnụ ahịa ọnụ ahịa na nnukwu ọrụ.
Centerlọ Ọrụ vidiyo